स्वास्थ्य, पुरुष स्वास्थ्य
यस्तो पुस-अप, पुल-अप र अरूलाई रूपमा एउटा तरिका वा अर्को, मुख्य (आधारभूत अभ्यास) को कार्यान्वयन सामना बाहिर काम,। र, अक्सर, त्यहाँ एकदम प्राकृतिक र उचित प्रश्न छ: "पुस-अप सही कसरी गर्ने?"। धेरै त्यहाँ धक्का सजिलो केही हो, यो हास्यास्पद छ भनेर भन्न हुनेछ। तथापि, यो त छ। तपाईं वास्तविक "आधार" को लागि एक धक्का बनाउन जान्नु आवश्यक छ कि केही सुविधाहरू छन् तपाईं को लागि (लाभदायक)। सबै व्यायाम संग, खाने पछि 3-4 घण्टा भन्दा यो पहिले प्रदर्शन छैन। यो व्यायाम लागि विभिन्न विकल्प को एक नम्बर हो:
• Pushups व्यापक हात अन्तरालमा।
• काँध स्तर मा हात मा पुश-अप।
• (दुई सम्पर्क करङहरु पाम मा पाम) साँघुरो पकड Pushups।
• कम ध्यान हातले थिच्ने-अप।
• साथै गति र आन्दोलन को आयाम विभिन्न विकल्पहरू।
अधिकांश मानिसहरू, जब सोधे, "पुस-अप कसरी गर्ने?" कसरी आफ्नो मानक रूप (प्रदर्शन) मा पुस-अप गर्न वर्णन गर्दछ। यो embodiment अभ्यास यो हात को यस्तो स्थिति triceps रूपमा, पर्याप्त बराबर प्रदान गर्दछ प्रभाव (लोड को मामला मा) कारण र pectoral मांसपेशीमा लागि मानक मानिन्छ, एक हात abutment काँध चौडाई implies। म, सबै विकल्प पुस-अप हो कि सही हो याद गर्नुहोस्, कारण व्यक्तिगत मतभेद तिनीहरूलाई केही अरूले भन्दा तपाईं अधिक भेट्नुपर्छ हुनेछ। प्रदर्शन पुस-अप भएको व्यापक-अन्तरालमा पाखुरामा झूट को जोर मा, तपाईं को triceps brachii मांसपेशी मा बोझ easing बेला pectoral मांसपेशीमा मा अधिकतम लोड (तनाव मुख्यतः पार्श्व क्षेत्रमा मा, मांसपेशी समूहहरु को वृद्धि मा लाभकारी प्रभाव छ जो) प्रदान गर्नुहोस्। यो व्यायाम को विशेषता pectoral मांसपेशीमा र आफ्नो मात्रा समग्र मांसपेशिहरु वृद्धि ध्यान केन्द्रित गर्न छ।
के संकीर्ण पकड पुस-अप दिन्छ? यसलाई सरल छ - stretching र अधिकतम छाती मांसपेशीमा कम छैन जबकि विकल्प व्यायाम, triceps अधिकतम लोड लागि डिजाइन गरिएको छ। उत्तरार्द्ध को "पम्पिंग" medially स्थित pectoral मांसपेशीमा को भागहरु प्रदान गर्दछ। पुस-अप कसरी गर्न आफूलाई लागि निर्णय, को पेशी समूह अरूलाई भन्दा बढी प्रशिक्षण आवश्यक छ कि चयन गर्नुहोस् र उपयुक्त व्यायाम उठाउनुहोस्। यो व्यायाम अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सास छ। कसरी सही सास फेर्न गर्न गर्दा पुस-अप? - शुरुआती बीचमा र बाहिर सबै भन्दा लोकप्रिय छ जो, प्रश्न छ। सबै शक्ति अभ्यास संग, मान्य आधारभूत नियम हो: को exhalation अधिकतम प्रयास समयमा गरिन्छ। यो प्रयास शरीर हुर्काउन तल्ला सतह माथि को एक समयमा आउँछ।
यो समय प्रदर्शन Exhale एक शक्ति लोड समयमा अंतर-पेट दबाब कम रूपमा सही साँस, धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर सम्झनु पर्छ। हामी धेरै अक्सर खोज्नेहरूको र नयाँ, प्रभावकारी अभ्यास को परीक्षकको छन्। किन यो हात-हातमा को मांसपेशिहरु, साथै बलियो आउँदा छ को पाखुरा को मांसपेशिहरु त्यहाँ अर्को व्यावहारिक प्रश्न छ: "? आफ्नो औंलाहरुमा पुस-अप कसरी गर्न"। सुरु गर्न, यो कि जोइन्टहरूमा को कुनै पनि विकृति मानिसहरूलाई यो व्यायाम गर्न सिफारिस गरिएको छैन टिप्पण लायक छ। यो व्यायाम को कार्यान्वयन रोक्न कि रोगहरु छैन भने तपाईँले चलाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै सबै पाँच औंला मा झुकाव भुइँमा हात राख्न। औंलाहरुमा समान रूप एक सर्कल, पंख shuttlecocks को प्रकार मा प्रबन्ध गर्नुपर्छ। को अभ्यास को समयमा, आफ्नो औंलाहरु र हात अझै पनि हेर्नुहोस्। सही यो व्यायाम प्रदर्शन, तपाईं सजिलै को मांसपेशिहरु बलियो बनाउन सक्छ हातमा, र आफ्नो dynamometry कि प्रत्यक्ष प्रमाण हो। पुस-अप प्रदर्शन, गति र गति को दायरा ध्यान। सबै भन्दा राम्रो विकल्प jerks बिना बिस्तारै र समान रूप यो व्यायाम गर्न हुनेछ। हथियार को अधिकतम विस्तार गर्न (कुनै sagging हुँदैन), सेक्स-रुचाउने को अलिकति स्पर्श बाट गति को दायरा नियन्त्रण, बिल्कुल मुर्कुट्टा होल्ड: प्रयोगले समयमा, सारा शरीर नियन्त्रण।
अब तपाईं यो तपाईं को लागि आफ्नो अधिकतम लाभ थियो भनेर पुस-अप कसरी गर्न थाहा र आफ्नो पेशी प्रणाली बलियो बनाउन मद्दत गर्ने। शुभकामना छ!
कसरी masturbate गर्न रोक्न?
हामी prostatitis व्यवहार गर्छन्। prostatitis को लक्षण
के रक्सी आफ्नो शरीर गर्छ
को scrotum दुखाइ
निर्माण के हो
Primula Akaulis मिक्स: हेरविचार र वृद्धि अवस्था
वजन घटाने को लागि टकसाल: व्यंजनहरु, गुणहरु, contraindications
भिभर देखि व्यञ्जन: बारबेक्यू र पुच्छर
Nevsky Prospekt को सबै भन्दा रोचक स्थलहरु सेन्ट सेन्ट पीटर्सबर्ग: विवरण, फोटो
परिवहन कर को ऋण बाहिर कसरी पाउन?
Rethymno सूर्यास्त3* (ग्रीस / क्रेते) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
प्रोटोसावको आहार। समीक्षा र पोषण कार्यक्रम
अमेरिकी भारतीय-मोहक। कुलका इतिहास र संस्कृति